Image Compression သည်ရှာဖွေခြင်း၊ မိုဘိုင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Martech Zone
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများကသူတို့၏နောက်ဆုံးရုပ်ပုံများကိုထုတ်ပေးသောအခါဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်အများအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုအသင့်ပြင်ထားခြင်းမရှိပါ။ image compression သည်ပုံရိပ်၏ဖိုင်အရွယ်အစားကို (၉၀%) တောင်မှသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ပုံ၏ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချခြင်းသည်အနည်းငယ်သောအားသာချက်များရှိနိုင်သည်။
ပိုမြန် Load Times - ပိုမြန်သောစာမျက်နှာတစ်ခုကိုတင်ခြင်းသည်သင်၏အသုံးပြုသူများကိုစိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ဘဲသင်၏ site နှင့်ကြာကြာထိတွေ့နိုင်မည့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်ဟုလူသိများသည်။
ပိုကောင်းသော Organic Search Rankings - ဂူဂဲလ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောဆိုဒ်များကိုနှစ်သက်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆိုက်တင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်လေလေပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်း - ပိုမိုမြန်ဆန်သောဆိုဒ်များကပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်
ပိုကောင်းတဲ့ Inbox နေရာချထား - သင်သည်သင်၏ဆိုဒ်မှကြီးမားသောရုပ်ပုံများကိုသင်၏အီးမေးလ်ထဲသို့ထည့်သွင်းပါကအ ၀ င်စာပုံးအစားနဂိုဖိုင်တွဲသို့တွန်းပို့နိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူခြင်းမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်၏ပုံများကိုအမြဲတမ်းချုံ့။ ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးသူတို့၏စာမျက်နှာအမြန်နှုန်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ site ပေါ်တွင်အချိန်နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများတိုးတက်မှုကိုအမြဲတွေ့မြင်ရပါသည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ် optimization ကိုမောင်းနှင်ရန်အလွယ်ဆုံးနည်းတစ်နည်းဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုများစွာအကျိုးပြုသည်။
ကို Select လုပ်ပါ ပုံရိပ်ကောင်းများ - လူအများအပြားကမက်ဆေ့ခ်ျကို ဖြတ်၍ ၀ င်ရန်အလွန်ကြီးသောပုံရိပ်၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့တွက်ကြသည်။ ၎င်းသည် (ဤဆောင်းပါးကဲ့သို့) သတင်းစာ၊ ပုံ၊ ဇာတ်လမ်းစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
သိပ် သင့်ရဲ့ပုံတွေ - သူတို့အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာသူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန် load လုပ်လိမ့်မယ် (ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ရိုက်သံ ၎င်းတွင် WordPress plugin များစွာရှိသည်။
သင့်ပုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ဖိုင်အမည်များ - ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သောဖော်ပြရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုသုံးပြီးစကားလုံးများအကြားမျဉ်းရှည် ((underscores) မသုံးပါနှင့်။
သင့်ပုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ခေါင်းစဉ် - ခေါင်းစဉ်များသည်မျက်မှောက်ခေတ်ဘရောင်ဇာများနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
သင့်ပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သောစာသားကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ (alt + စာသားမ) - အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန် alt စာသားကိုတီထွင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ပုံသို့သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများထည့်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လင့်ခ် သင့်ရဲ့ပုံများ - ပုံများကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်းလူများသည်အခြားစာမျက်နှာများသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သောလင့်ခ်ကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်သောလူများ၏အရေအတွက်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။
စာသားထည့် မင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် - လူတွေဟာမကြာခဏရုပ်ပုံတစ်ခုဆီဆွဲခံရပြီးအခွင့်အရေးရစေတယ် သက်ဆိုင်ရာစာသားထည့်ပါ ပိုကောင်းတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမောင်းနှင်ဖို့ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု။
သင့်ရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းပါ ဇယားများ - ကျွန်တော်အကြံပြုပါသည် ရာထူးသင်္ချာ SEO ဆိုသည်မှာ သင် WordPress တွင်ပါဝင်လျှင်။
အသုံးချ တုံ့ပြန်တတ်သော ပုံများ - အားနည်းချက်ကိုအခြေခံသည့်ရုပ်ပုံများနှင့်အသုံးချခြင်း သီရိ များပြားလှသောပုံရိပ်အရွယ်အစားကိုပြသရန် screen resolution ပေါ် မူတည်၍ စက်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်တွင် မူတည်၍ ဓာတ်ပုံများကိုပိုမိုလျှင်မြန်စေသည်။
သင့်ပုံများကိုaကနေတင်ပါ အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက် (CDN) - ဤဆိုဒ်များသည်ပထဝီအနေအထားအရတည်ရှိပြီးသင်၏ပုံများကိုသင်၏ visitors ည့်သည်များ၏ဘရောက်ဇာများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ဝဘ်ဆိုက် Image ကို Optimization လမ်းညွှန်
WebsiteBuilderExpert မှဤပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက် ဝဘ်ဆိုက် Image ကို Optimization လမ်းညွှန်, image compression နှင့် optimization ၏ကောင်းကျိုးများအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း၊ ပုံသဏ္formatာန်လက္ခဏာများနှင့်ပုံအဆင့်မြှင့်တင်မှုအပေါ်တစ်ဆင့်ချင်းစီ။
Kraken ပုံ compression ပလက်ဖောင်း
သင့်ဆိုဒ်ကို ၀ င်ရောက်သည့်အချိန်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိုက်လိုလျှင်၊ ရိုက်သံအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောဂရပ်ဖစ်များသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဖိုင်အရွယ်အစားကြီးလွန်းလှသည်။
ရိုက်သံ web interface အပြည့်အစုံ၊ အားကောင်းတဲ့ API ရှိပြီး WordPress Plugin ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်! သင်ပလပ်ဂင်တင်သည်နှင့်အလိုအလျောက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်ယခင်ကတင်ထားသောအခြားရုပ်ပုံများကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်သည်။ ရလဒ်အတော်လေးအံ့သြဖွယ်များမှာ:
အကယ်၍ သင်သည်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါက Kraken ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကိုဆက်သွယ်နိုင်စေရန် API ကီးများစွာကိုပေးထားသည်
Kraken အဘို့အ Up ကို Sign
မှတ်စုတစ်ခုပဲငါတို့သုံးနေတယ် Kraken Affiliate link ကို ဒီ post! အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ရိတ်သိမ်းရမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Tags: alt tag များalt + စာသားမCDNgoogle site မြန်နှုန်းimage ကိုချုံ့ပုံဖိုင်အမည်image ကို optimizationimage optimization လမ်းညွှန်ပုံရိပ် optimization infographicပုံအရွယ်အစားပုံရိပ် sitemapပုံခေါင်းစဉ်များစိတ်ကူးရိုက်သံပုံများပိုကောင်းအောင်စာမျက်နှာမြန်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုပုံရိပ်တွေseoseo ပုံရိပ် optimizationရေရှည်site အမြန်နှုန်းသီရိအလွန်သေးငယ်သော pngဝဘ်ဆိုက် optimization လမ်းညွှန်buildရာဝတီwordpress image ကိုချုံ့wordpress ပုံအရွယ်အစားwordpress kraken plugin ကိုwush smush